Apple TV + wuxuu soo bandhigayaa filimka 'trailer' xilli ciyaareedkiisii ​​labaad ee 'Home Before Dark' | Wararka IPhone
Bilaabashada Apple TV + Waxay ahayd maalgashi maqal oo aad muhiim u ah xafiisyada Cupertino. Ujeeddadu waxay ahayd in la isku dayo in la abuuro lana soo saaro taxane iyo barnaamijyo telefishan oo qabanaya tirada ugu badan ee isticmaaleyaasha. Si kastaba ha noqotee, taxanaha waa sida midabada: mawduucyo badan oo aad u kala duwan, adkeysi iyo siyaabo lagu soo qabto sheekooyinka. Waxaa jira taxane taxane ah oo qabsaday dadka isticmaala sida 'Dadka oo dhan' ama 'Addoon', kuwaas oo horeyba u saxiixay xilli labaad. Mid kale oo ka mid ah taxanaha ugu caansan waa Hoyga Kahor Madoobaadka, riwaayad qarsoodi ah oo ay jilayaan Brooklynn Prince, Jim Sturgess iyo Abby Miller. Xilligiisii ​​labaad wuxuu yimid Juun 11 waxaana horeyba u haysanay trailer qaybtaan cusub.
Xilli ciyaareedkii labaad ee 'Guriga Kahor Madowga', Juun 11
Sheekada Hilde Lisko ayaa soo jiidatay quluubta iyo shaashadaha taageerayaasha TV-ga Apple +. Haweeneydan yar ee ku jileysa silsiladda Guriga Kahor Madowga waxay bilaabeysaa tacabir kadib markay u guurtay magaalo yar oo haro ku taal. Wuxuu ku noqdaa magaalo uu horey u degenaa iyo halkee Wuxuu waqtigiisa ku bixin doonaa raadinta runta iyo xallinta dacwad ay magaalada oo dhan, oo ay ku jiraan qoyskiisa, ay isku dayeen inay aasaan.
Qarsoodi shirqool, cudur dahsoon, iyo shimbiro dhimanaya. Hilde Lisko ayaa joojin doonta si ay u kashifto sirta Erie Harbor. Xilliga 2aad ee Guriga Kahor Madowga ayaa bilaabmaya Juun 11, kaliya TV-ga Apple +.
Xilligan labaad wuxuu raaci doonaa waddada kii ugu horreeyay: qarax ayaa ka dhacay beer tuulo, halyeeyaduna waxay isku dayi doonaan inay xalliyaan wixii dhacay iyagoo wajahaya awoodaha shirkadaha waaweyn. Intaas waxaa sii dheer, caafimaadka qoyskaaga ayaa sidoo kale khatar geli doona, taas oo fure u noqon doonta xilliga oo dhan. Waxay noqon doontaa 11 bisha Juun markaan si buuxda ugu raaxeysan karno xilli ciyaareedkaan labaad oo goos gooskiisa horay loo soo saaray.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple TV + waxay sii deyneysaa muuqaalka xilli-ciyaareedkii labaad ee 'Home Before Dark'